Deg Deg Daawo:Moorgan Oo Ku Dhawaaqay War Hurdada U Diiday Somaliland. – KHAATUMO NEWS
Deg Deg Daawo:Moorgan Oo Ku Dhawaaqay War Hurdada U Diiday Somaliland.
Janaraal Maxamed Siciid Xirsi Moorgan oo ka mid ah ragga u taagan Musharaxnimada Madaxweyne ee Maamul Goboleedka Soomaaliya ee Puntland ayaa mar kale hanjabaad hawada u soo mariyey Somaliland iyo gaar ahaan ciidamada Somalilan oo uu sheegay in uu qaadi doono tallaabo uu ku sheegay mid uu ku xoraynayo Gobolka Sool.
Janaraal Maxamed Siciid Xirsi Moorgan oo shalay si ballaadhan loogu soo dhaweeyey Magaalada Garoowe ee Caasimadda u ah Puntland oo ay dhawaan ka dhici doonaan doorashooyinka Madaxweynaha maamulkaasi ayaa waxa uu Moorgan si adag uga hadlay wax sida uu u wajihi doono Gobolo SOOL ka mid tahay oo uu sheegay in ay ka mid tahay Puntand oo xoog lagu qabsaday isaga oo sheegay in uu yaqaano dagaalka iyo sida loo xoreeyo deegaamo.
Moorgan oo kooxo dhallinyaro u badani u sacabo tumayeen ayaa mar uu warbaahinta kula hadlay huteelka uu ka degay Magaalada Garoowe waxa uu aad u dhaliilay siyaasadda Madaxweynaha wakhtigan Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo guud ahaanba siyaasadda iyo itijaaha maamul Goboleedkaasi u socdo oo uu ku tilmaamay mid aan qaan gaadhin oo aanay is lahayn da’da uu jiro iyo sida uu u laciifsan yahay.
Janaraal Maxamed Siciid Xirsi Moorgan oo si gaar ah u soo qaaday waxa uga meel yaalla Gobolada Sool iyo Sanaag Bari ayaa waxa uu yidhi: “Kolay waa qorshe qarsoon oo aan u baahnayn in aan halkan ka sheego. Waxba waa wax ii qorshaysan waxna waan idiin sheegi karaa waxa iiga meel yaalla. Arrinta Magaalada Laascaanood waa dayac ku yimid. Waxa dayacay maamuladii hadda ka hor joogay. Dastuurka Puntland waxa uu dhigayaa in 9-ka Gobo lee Puntland xuduudeeda ilaalinteedu ay tahay waajib saaran hadba dawladdii markaa joogta. Gobolka Sool xoog baa lagu haystaa waxaanan ku soo celin doonaa xoog. Haddi aan talada Puntland ku guulaysto wax badan oo qorshe ah ayaa jeebka iigu jira. Wax badan baa iiga yaalla Laascaanood. Waa magaalo weyn oo dalkeena ka mid ah. Yeeli mayno in xoog lagu haysto. Ballan waxaa iga ah in an soo celiyo. Waan naqaanaa sida arrimahaasi oo kale loo maareeyo balse maaha wax aan imika halkan idiinka sheegayo. Waa qorshe dagaal oo qarsoodi ah. Puntland iyo deegaamadeeda maqani waxa ay u baahan yihiin in waddo cad lagu rido anna waxaan ballan qaadayaa in aan waddo cad ku soo celiyo”.
Previous Post: War Deg Deg Ah:-Caaqil caan ah Buuhoodle Isku Casilay Iyo Wararkii ugu Danbeeyay. Xiisada Colaada.
Next Post: Deg Deg:Galmudug Oo Bahdishay Wasiiro Farmaajo U Diray Colaada.